Macedonia: Sakura – Cherry Blossom Celebration in Skopje …………Makedonia: Sakura – Firavoravoana Fa Vaky Felana Ny Serizy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Febroary 2018 11:15 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, Português, 日本語, Español, English
Na dia vitsy aza ireo Japoney miaina ao amin'ny Repoblikan'i Makedonia, maro ireo mponina ao an-toerana no nandray anjara tamin'ny fety faharoa fankalazana ny Sakura isan-taona – fety natokana ho an'ireo voninkazon'ny serizy ao Skopje, renivohitr'i Makedonia. Nampidirin'ireo mpikarakara ny fety ireo dojos fanaovana fanatanjahantena haiady, ary vao haingana ireo blaogera sasantsasany malaza no nanomboka ny blaogy ifandrimbonana, Japan@mk [MKD], sy nanomboka nanely ny resaka manerana ny tontolon'ny blaogy makedoniana.
Ny 12 Aprily no natao ny fetibe, teo amin'ny lalambe iray misy ireo hazo-na serizy Japoney nilahatra sy anatin'ny felany tanteraka, eo ankilan'ny kianjaben'i Skopje. Nahitana ireo fampisehoana haiady ny fandaharam-potoana, ny fiantsàna tononkalo haiku amin'ny fiteny Makedoniana, narahin'ny feonkira nolalaovina tamin'ny sodina Japoney, ny fanaovana ‘origami’, fanoratana ny anaran'ireo mpandray anjara tamin'ny sorakaliana Japoney, ary fanandramana ireo vokatra ara-pahasalamana novokarina avy amin'ny holatra Japoney.
Bi, iray amin'ireo mpikarakara sy mpanao Iaidō no nanoratra mikasika ny traikefany tao anatiny:
Nanjary tongalafatra ny haiku, ary vahiny telo no namaky tononkalo milamindamina avy amin'ireo andrarezina japoney sy ireo poety makedoniana. Nanao be marenina ny sasantsasany tamin'ireo mpanatrika ary nitaraina ho leo… Ny mpanatrika sasany naneho fomba fiaina tsy mampahazo aina tamin'ny fahalianana manafintohina, tamin'ny fitazonana sy fisintonana mihitsy aza ireo sabatra sy ny bokken teny an-tanan'ireo mpandray anjara.